Yintoni i-cadastre kunye ne-cadastral ireferensi yekhaya | Ezezimali
Encarni Arcoya | | Ihlaziywe 18/04/2021 20:43 | indawo yokuhlala
Ezimbini zeekhonsepthi onomdla wokwazi nzulu malunga nokuthengiswa kwezindlu zizinto ze-cadastre kunye nesalathiso se-cadastral. Omabini la magama asondelelene kakhulu, kodwa kwangaxeshanye ahlukile. Ukukunika umbono, ireferensi ye-cadastral ayinakubakho ngaphandle kwe-cadastral, kwaye ngokuchaseneyo, i-cadastre ayikho ukuba akukho sikhombisi se-cadastral.
Kodwa, Yintoni icadastre? Kwaye isalathiso se-cadastral? Apha ngezantsi sikunceda ukuba uqonde ezi ngcamango zimbini kwaye ubone ukuba zeziphi ezidibanisa.
1 Yintoni iCadastre
1.1 Ulwazi oluqokelelwe kwiCadastre
2 Yintoni ireferensi yecadastral
2.1 ICadastre kunye nereferensi yeedolophu zedolophu
2.2 ICadastre kunye nesalathiso se-rustic cadastral
3 Ungayibhalisa njani ipropathi kwiCadastre kwaye ubhekise kwi-cadastral
ICadastre iluhlobo "lobalo bantu", irekhodi lolawulo elinxulunyaniswa noNondyebo apho kuqokelelwa khona yonke idatha enxulumene nokuthengiswa kwezindlu. Ngamanye amagama, sithetha ngendawo apho unokufumana khona inkcazo kunye nolwazi malunga nomhlaba nomhlaba wazo zonke iintlobo: i-rustic, idolophu, eneempawu ezizodwa ...
Kuya kufuneka uyazi loo nto Ukubhalisa izindlu nomhlaba kwiCadastre kunyanzelekile, Kodwa ngokungafaniyo nezinye iinkqubo, kule meko akukho mfuneko yokuba uhlawule nantoni na; Isimahla (ngokuchasene neRejista yePropati).
Kwaye yintoni iCadastre? Ewe kunjalo imisebenzi eyahlukeneyo ibandakanyiwe kuMthetho weCadastre yeReal Estate. Zonke zinokuzilolonga:
Ilungele iinkonzo eziphambili kunye nolawulo lwamaphondo ahlukeneyo kunye nezixeko (ngaphandle kwelizwe laseBasque naseNavarra).
Ilungele ukusebenzisana nolunye ulawulo kunye namaziko oluntu.
Kwaye yeyiphi imisebenzi eyenzayo? Kule meko, ezinye zazo zezi:
Nika ukhuseleko kunye nokwenza izinto elubala xa uqokelela idatha ekufuneka yenziwe yi-cadastre ukumisela ukuba yeyiphi ipropathi, ixabiso layo le-cadastral, iimitha zomhlaba ...
Yisebenzise ukubala isiseko serhafu seRhafu yokuThengisa izindlu (eyaziwa ngokuba yi-IBI), kunye neRhafu yeRhafu, iRhafu kaMasipala ekunyuseni kwexabiso lomhlaba wedolophu, iRhafu kwilifa kunye neminikelo, kunye nepropathi ugqithiselo, okanye irhafu yengeniso yomntu.
Ukuphuhlisa izicwangciso zocwangciso lwedolophu.
Ulwazi oluqokelelwe kwiCadastre
Njengoko besesitshilo ngaphambili, iCadastre iqokelela uthotho lolwazi olunxulumene nokuthengiswa kwezindlu. Kodwa loluphi ulwazi? Ngokukodwa, Unokufumana oku kulandelayo ngokubhekiswa kwipropathi:
Isalathiso sakho secadastral.
Ixabiso le-cadastral elinalo.
Ngubani umnini welo lizwe.
Ukusetyenziswa kunye nendawo ekuyiwa kuyo inayo.
Uhlobo lokwakha kunye nomgangatho wayo.
Yintoni ireferensi yecadastral
Ngoku ukuba uyazi ukuba yintoni iCadastre, ireferensi ye-cadastral kulula ngakumbi ukuba uyiqonde. Yi Ukuchongwa kwezindlu, kunyanzelekile kwaye zisemthethweni, kunye nesimahla. Yenziwe ngekhowudi yealphanumeric; ngokukodwa, malunga namagama angamashumi amabini abhalisa ipropathi onayo. Ukongeza, kuya kufuneka ukhumbule ukuba akunakubakho izikhombisi ezibini ze-cadastral ezifanayo, kodwa elowo uya kuba nenombolo eyahlukileyo.
Isalathiso se-cadastral sinokwaziwa ngeendlela ezininzi:
Isatifikethi esivela kwiHolo yeSixeko.
Ngokubonisana ngekhompyutha kwiwebhusayithi esemthethweni yeCadastre.
Ngesatifikethi seRegistry yoMhlaba yoLawulo.
Kwirisithi yokuhlawulwa kwe-IBI (iRhafu yokuThengiswa koMhlaba).
ICadastre kunye nereferensi yeedolophu zedolophu
Kuba sifuna ukusebenza ngakumbi, siza kukufundisa injani ireferensi yase-cadastral yedolophu kunye nenye ye-rustic ukuze ukwazi ukwahlula enye kwenye.
Kwimeko yedolophu, umzekelo wayo inokuba linani:
Kananjalo, ayenzi ngqondo ininzi, kodwa kuya kufuneka wazi ukuba iqela ngalinye libhekisa kwicandelo elithile lolwazi. A) Ewe:
Amanani ayi-7 okuqala aya kumisela ifama, iploti okanye isakhiwo ekubhekiswa kuso.
Amanani ama-7 alandelayo afumana ipropathi kwisicwangciso.
La manani mane alandelayo abonisa ipropathi ekwisiqwenga somhlaba.
Kwaye oonobumba ababini bokugqibela zezempazamo zokukhutshelwa.
ICadastre kunye nesalathiso se-rustic cadastral
Xa sithetha nge-rustic good, Isalathiso se-cadastral sitshintsha kakhulu. Umzekelo welo nani ungali-18 072 A 182 00027 001 FP.
Njengoko ubona, inde kunangaphambili, kwaye ngexesha elifanayo iqela ngalinye limisela ulwazi olwahlukileyo.
Amanani amabini okuqala abhekisa kwiphondo.
Umasipala umiselwe kula manani mathathu alandelayo.
Ileta isixelela ukuba yintoni na indawo yokudityaniswa komhlaba.
Amanani amathathu alandelayo asixelela malunga ne-polygon okanye indawo apho ikhoyo.
Ezintlanu ezilandelayo zichonga ipasile nganye kwindawo esikuyo eyethu.
Kumanani amane alandelayo indawo echanekileyo apho ipropathi ibekwe khona kwisiza.
Okokugqibela, oonobumba ababini basetyenziselwa iimpazamo zokukhutshelwa.
Ungayibhalisa njani ipropathi kwiCadastre kwaye ubhekise kwi-cadastral
Ukuba ufumene indawo yokuthenga izindlu nomhlaba kwaye kufuneka uyenze le nkqubo, siya kukunceda ukuba uyenze ibe lula ngangokunokwenzeka. Ukuqala, kuya kufuneka uyazi ukuba Ukubhalisa iipropathi kwiCadastre kulula kwaye ungayenza ngeendlela ezintathu ezahlukeneyo:
Ngemodeli ye-900D, sisibhengezo sokuba umntu onomdla makazise. Kule meko, inokukuvumela ukuba uyenze kwi-Intanethi (nangona oku uzakufuna i-ID ye-elektroniki okanye isatifikethi sedigital).
Ngonxibelelwano neCadastre. Oku kufuneka kuthunyelwe ngeeNotari, abaBhalisi bePropathi okanye kuLawulo loLuntu.
Olunye ukhetho, kunye nesizathu sokuba ungafumanisa ukuba, ukusuka kunyaka omnye ukuya kolandelayo, i-IBI yakho iphakanyisiwe kukuhlolwa. Ukuba iintshukumo zokungqinisisa ziyenziwa, zinokubandakanya izindlu nomhlaba ngaphandle kwesicelo esisesikweni okanye intetho. Kunjalo, Ukuba idatha ayilunganga, ungasoloko unika izityholo okanye ulungise ukungangqinelani.
Kuya kufuneka ugcwalise ulwazi abakubuza lona malunga nekhaya, ubunini, njl. ukuze ndikwazi ukuthobela inkqubo. Kwaye, khumbula, kuya kufuneka uyenze ngexesha elingadlulanga kwiintsuku ezili-10 ukusuka xa kufunyanwa umhlaba nomhlaba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » indawo yokuhlala » Yintoni i-cadastre kunye nesalathiso se-cadastral